Shiinaha Lab-isticmaalka Dufanka-Jet Mill Mill 1-10kg Warshad Capacity iyo saarayaasha | Qiangdi
Sawirka qaab dhismeedka mashiinka weyn Jet
Qalabku wuxuu noqon doonaa dhulka iyadoo la dardargelinayo saameyntiisa isla markaana ay si isdaba joog ah isugu dhacaan dhexda xawaaraha sare ee hawada. Waxyaabaha la jajabiyey waxaa lagu kala saaraa shaxanka dhibcaha iyo walxaha loo baahan yahay waa la kala saarayaa markaa waxaa soo ururiyey Cyclone Separator iyo Collector, Qalabka khaldan waxaa dib loogu celiyaa qolka wax lagu shiido si loo sii jajabiyo ilaa ay ka gaaraan cabirka loo baahan yahay.
1.Mainly for baahida awoodda Low, 0. 5-10kg / h, ku habboon in loo isticmaalo Shaybaarka.
Halbeegga waxaa loogu talagalay inuu yahay qaab dhismeed is haysta oo gudaha ah oo lagu fulinayo qashin-wareegga wareegga.
Heerkulka kor uma kaco, qeylada unugyada hooseysa, wasakh la’aan, qashin yar inta lagu guda jiro shiidista.
Cabbir yar, qaab is haysta, ku habboon in loo isticmaalo Shaybaarka. Nidaamku wuxuu qaataa xakamaynta shaashadda taabashada caqliga, hawlgalka fudud iyo xakamaynta saxda ah.
5.With caddayn hawo wanaagsan, hubi jawi nadiif ah. Hawlgal ku habboon iyo dayactir, hawlgalka qalabka otomaatiga ah.
6. Baaxadda qiimeynta ballaaranganaaxa burburaya maaddada ayaa lagu xakamayn karaa iyada oo la hagaajinayo xawaaraha wareega ee giraangiraha dhibcaha iyo nidaamka. Guud ahaan, waxay gaari kartaa d = 2 ～ 15μm
7. Isticmaalka tamarta yar:Waxay badbaadin kartaa 30% ～ 40% tamar marka la barbar dhigo kuwa kale ee hawo-mareenka hawo-mareenka ah.
8. Duug hoose: Sababtoo ah saameynta burburka waxaa sababa saameynta iyo isku dhaca walxaha, walxaha xawaaraha sare ku dhaca ayaa dhif ku dhaca darbiga. Waxay quseysaa in la burburiyo waxyaabaha ka hooseeya Miisaanka Moh ee 9.
Waxaa si ballaaran loo adeegsadaa maqaarka maqaarka sare, macdanta kiimikada, daawooyinka reer galbeedka, dawada dhaqameed ee Shiinaha, kiimikada beeraha iyo dhoobada, oo ku habboon in lagu isticmaalo Shaybaarka.
Naqshadeynta Faahfaahinta Mashiinka
1. Qaab dhismeedku waa mid fudud, oo leh dalool dhaqid, si fudud loo nadiifiyo
2. Baaskiil leh dabool si looga ilaaliyo qaadashada budada
3. Qaab dhismeedka is haysta: qabsashada dhulku waa yar yahay
1. Si adag ula jaan qaada nidaamka maaraynta tayada ISO9001-2000;
2. Xakamaynta adag ee baaritaanka wax iibsiga, kormeerka nidaamka illaa caddaynta kama dambaysta ah;
3. Wuxuu aasaasay dhowr waaxood oo QC ah si ay u fuliyaan xeerarka xakamaynta tayada;
4. Tusaalooyinka tayada oo faahfaahsan:
(1) Faylasha oo dhameystiran si loo xakameeyo tayada iyo ka jawaab celinta tayada;
(2) Baadhitaan adag oo lagu sameeyo qaybaha ay ka kooban yihiin shiideyaasha wax shiida, si loo hubiyo in alaabooyinka ka caagan waxyeellada la iska ilaaliyo
miridhku cunay iyo ranjiga oo diirmay goor dambe.
(3) Keliya qaybaha aqoonta u leh ayaa la soo ururin doonaa oo qalabka guud waa in si buuxda loo hubiyaa iibka ka hor.
Marka la xaqiijiyo iibinta, waxaan bixin doonnaa adeegyada farsamada ee soo socda:
1. Naqshad u samee socodka khadkaaga wax soo saarka iyo qaabeynta qalabka, bilaash;
2. Bixi sawirro aasaas u ah mashiinnada shiidaya oo ay amar ku siinayaan macaamiisha iyo sawirrada qaybaha la xiriira, iwm;
3. Xuduudaha farsamo ee qalabka durugsan ayaa la bixin doonaa;
4. Talooyin farsamo oo bilaash ah oo ku saabsan hagaajinta qaabeynta qalabka iyo arjiga;
5. Qalabaynta (macaamiisha waxay u baahan yihiin inay bixiyaan kharashka);
Kadib Adeeggii Iibinta
1. Waxaan u diri doonnaa farsamayaqaankeena goobta si uu u hago rakibida iyo rakibida qalabka.
2. Inta lagu jiro rakibidda iyo hawlgelinta, waxaan bixinnaa adeegga tababarka wadaha.
3. Taariikhda hubinta tayada waa hal sano kadib markii la shaqeeyay. Ka dib markaa, waanu ururin doonaa kharashka haddii aan ku siino dayactirka qalabkaaga.
4. Dayactirka qalabka cilladaysan ee ka dhashay maaraynta qaldan (kharashka ku habboon ayaa laga qaadi doonaa).
5. Waxaan ku siineynaa qaybaha qiimo qiimo leh iyo dayactir la heli karo.
6. Haddii qalabka dayactirka loo baahdo kadib marka taariikhda hubinta tayada ay ka dhacdo, waxaan ururin doonaa kharashka dayactirka.
Hore: Lab-isticmaal nooca cajaladda nooca cajaladaha QDB-50 QDB-100 QDB-150
Xiga: Warshadaha Batariga Iyo Waxyaabaha Kale ee Kiimikada ah Isticmaal Qalabka Sariirta Sariirta lagu sifeeyo